China HSG01-E Series Hydraulic Cylinder fekitari uye vagadziri | Xinrun
Rori Telescopic Hydraulic ...
HSG mhando ouinjiniya hydraulic humburumbira ndeyekuita kaviri tsvimbo imwe pisitoni mhando hydraulic humburumbira, iyo ine hunhu hweyakareruka mamiriro, akavimbika mashandiro, inokodzera gungano uye disassembly, nyore kugadzirisa, buffer chishandiso uye dzakasiyana nzira dzekubatanidza. Inonyanya kushandiswa mukugadzira michina, kutakura, kutumira, kusimudza michina, michina yemigodhi nemamwe maindasitiri.
Kutsvagisa uye Dhizaini
1.Kambani yedu ine mainjiniya matanhatu ane makore makumi maviri, makumi mana emakore ehunyanzvi ruzivo.
2.Hydraulic cylinder inowedzera uye inoshandiswa zvakanyanya muinjiniya yeinjiniya, uye zvido zvehunyanzvi zvakare zvakakwirira uye zvepamusoro. Iyo inonyanya kushandisa mhando yekumanikidza kupedzisa kuita yayo simbi inotonhora epurasitiki hunhu pane yakajairwa tembiricha. Iko kushandiswa kwekupeta maturusi ndeyekushandisa kumwe kumanikidza pamusoro peichi chigadzirwa, kuitira kuti pamusoro pesimbi yechigadzirwa chizove nepurasitiki chiitiko, wochizadza mumupasi wakakomberedzwa wemupata wekutanga zvakasara, kuitira kuti workpiece ibudise. Iyo yakashata kukosha kwechigadzirwa yakadzikira. Nekuda kweiyo deformation yepurasitiki yesimbi yepasi inoiswa pasi peiyo hydraulic kumanikidza, kutonhora kuomarara kwepamusoro pevhu uye kunatsiridzwa kwezviyo zvinoumba chaiwo fibrous chimiro. Iko kusimba uye kuomarara kwesara rekushushikana kwehutete kunovandudzwa, nekudaro kunatsiridza kusagadzikana kwehurosi uye kupfeka kuramba kwezvigadzirwa zvebasa.
3.Design ye hydraulic humburumbira manotsi:
a.Kushandiswa kwemidziyo, mamiriro ekushandira.
b. Maumbirwo ehunhu hwekushanda mashandiro, mutoro mamiriro, kumhanyisa chinodikanwa, saizi yekurohwa uye chiito chinodiwa.
c.Sarudzo yakasarudzwa yekumanikidza ye hydraulic system.
4.Tinogona kugadzira humburumbira zvinoenderana nevatengi 'logo.
5.Yedu hydraulic humburumbira ine mhando dzakawanda, inogona kuita zvinoenderana nevatengi vese 'zvinodiwa, kutaurwa uye kudhirowa.
Iwo ma hydraulic cylinders anoshandiswa kutakura mota, kurongedza muchina, vanocheka zvekurima, zvekurima hydraulic turnover mapurazi, kusimudza chikuva.
Pashure: Excavator Hydraulic Cylinder
Zvadaro: Hydraulic Flap Telescopic Cylinder
Kaviri Kuita Telescopic Hydraulic Cylinder
Imbai Kuita Actress Telescopic Hydraulic Cylinder
Imwechete Kuita Hydraulic Cylinder
Chigadzirwa Chigadzirwa 1.Kazhinji isu isu tinogadzira zvigadzirwa zvakakura uye zvepakati-saizi. Iyo inokodzera mamiriro ezvinhu ekumanikidza kwakanyanya kwe350 kgf / cm ^ 2 uye kudziya kwe - 20 ℃ - 100 100 (iwo maratidziro enzvimbo inotonhora ndi - 40 ℃ - 90 ℃). Huru Zvimiro 2.a. Diki saizi, kurema uremu uye simba rakakwira: iko kusarudzwa kwezvinhu, tekinoroji yekugadzirisa uye tekinoroji yewelding yemuviri wesilinda nepisitoni tsvimbo zvinogamuchirwa zvinoenderana nesimba, kuneta dhizaini uye kushambadzira
Pisitoni Hydraulic Cylinder
Product Detail: 1. Hydraulic cylinder bore Iyo cylinder bore ichasarudzwa zvinoenderana nebasa rekumanikidza, tembiricha yebasa, mamiriro ebasa uye zvimwe zvakakosha zvinodiwa. 1.1 Cylinder Tube: inotonhorera yakadhonzwa nemazvo isina musono simbi chubhu, inopisa yakapetwa musono simbi chubhu, ndokugadzira chubhu. 1.2 Tube Zvinyorwa: SAE1020 (20 #), SAE1045 (45 #), 16Mn (Q345B), 27SiMn, nezvimwe. 1.3 Surface Roughness: R0.16-0.32μm 1.4 Mukati meChromating: Kana zvichidikanwa, mukati chubhu inozoitwa chromated. 2.Piston tsvimbo 2.1 Rod Rod: 35 #, SAE1045 (45 #) ...
Chigadzirwa Chigadzirwa 1.Excavator akateedzana eiri kuita imwe bhaketi mhando hydraulic humburumbira inoshandiswa sekudzoreredza Linear inofamba actuator mu excavator hydraulic system. PC yakateedzana hydraulic humburumbira rudzi rwekuchera hydraulic cylinder chigadzirwa chakanyatso kuongororwa uye kugadzirwa neKomatsu neKayaba tekinoroji yeJapan. Iine hunhu hweakakwira kushanda kumanikidza, kuvimbika mashandiro, kumisikidza kumisikidza uye nekukatanura, nyore kugadzirisa uye bhafa mudziyo. Zvisimbiso zvese zveizvi ...
Chigadzirwa Chigadzirwa Hydraulic kurova rova ​​rudzi rwechizvinozvino zvinhu zvekuburitsa michina. Chero bedzi ichitsigirwa, inogona otomatiki uye kuturunura zvakananga zvinhu. Iko kuburitsa kugona kwakanyanya kwazvo uye guruva racho ishoma. Iyo dumper inoda kutanga iyo hydraulic chiteshi mota kuti idzvinyirire ruoko kusimuka kune yakakwira chinzvimbo, uyezve yakazara yakazara gondola mota inodhonzwa neinorema ngoro shunting muchina, uye iri pane mota inotsigira danda re dumper. Musana weplate vibrator ipus ...
Rori Telescopic Hydraulic Cylinder
Chigadzirwa Chigadzirwa 1.Telescopic hydraulic cylinder inonzi zvakare yakawanda-nhanho hydraulic cylinder. Iyo inoumbwa nemaviri kana akawanda-masiteji episitoni sepombi, anonyanya kugadzirwa nesilinda musoro, humburumbira dhiramu, ruoko, pisitoni uye zvimwe zvikamu. Kune inlet uye nzira yekubuditsa chiteshi a uye B kumagumo ese esirinda dhiramu. Mafuta paanopinda muchiteshi a uye mafuta achidzoka kubva kuchiteshi B, yekutanga piston ine nzvimbo yakakura inoshanda inosundirwa, uyezve iyo diki yechipiri nhanho pisitoni inofamba. Nekuti kuyerera kwacho ...